लेखकले सकेसम्म, जानेसम्म राम्रो लेख्ने हो – Sadarline
कोहलपुरलमा आठ जुवाडे पक्राउ
पदम गौतम, लेखक, उपन्यासकार
सदरलाइन संवाददाता २८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ११:०५
बिगतमा लामो समय पत्रकारितामा संलग्न लेखक पदम गौतम हाल युरोप बसाइमा छन् । मिडियामा कार्यरत् रहँदा उनी साहित्य, राजनीति र शिक्षाका बिषयमा कलम चलाउँथे । उनका पूर्वप्रकाशित कृतिहरुमा फूलको लाशमाथि र रगतको शयनकक्षमा दुई कविता संग्रह तथा एक लासको फूल र घाम झुल्कनु अघि दुई गजल संग्रह रहेका छन् । उनको पहिलो उपन्यास विश्रामपुर हालै बजारमा आएको छ । पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएका लेखक गौतमको स्थायी बसोवास मोरङ्को रतुवामाई हो । प्रस्तुत छ, उनीसँग उपन्यास लेखन र त्यस सन्दर्भमा गरिएको इमेल वार्ता ।
भर्खरै बजारमा आएको विश्रामपुरमा के छ ? यो कस्तो बिषयको उपन्यास हो ?
नेपालको पूर्वी तराईमा म सानो हुँदा पहाडबाट मान्छे बसाइँ सर्ने क्रम तीब्र थियो । मधेशमा रहेको घना जंगल फाँडेर मेरो परिवार मोरङ्को निकै तल बस्न आइपुग्यो । मेरो सम्झनामा भएका त्यो समयको मधेशको अनकण्टार परिवेश र त्यहाँको कथा मलाई पहिलादेखि नै लेख्न मन थियो । उपन्यासको मूल बिषय त्यही हो ।
भनेपछि उपन्यासमा पुरानो मधेशको चित्रण मात्रै छ ?
मैले उठान गरेको परिवेश र उपन्यासको क्यानभास चाहीँ त्यो हो । तर, त्यो समयको राज्यको नीति, जनताका समस्या, टाठाबाठा र अगुवाहरुको व्यवहारसँगै त्यहाँको राजनीतिक परिवेश बिना त कुनै पनि लेखन पूरा हुँदैन रहेछ । त्यही परिवेशमा तत्कालीन समयमा सबैभन्दा सक्रिय र पछि नेकपा माले बनेको वामपन्थी पार्टीका उत्थानकालदेखि हालसम्मका गतिबिधि प्रतीकात्मक किसिमले ल्याउने प्रयास गरेको छु । जनमत संग्रहदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिका मुख्य घटना चित्रण गरिएका छन् ।
विदेश बसेर लेख्नका लागि उपन्यास नै किन रोज्नुभयो ?
उपन्यासको स्पेस निकै ठूलो हुन्छ । अलिक लामा बिषय र कथा बिस्तृतरुपमा अहिलेको समयलाई सुनाउनका लागि कविता वा अन्य छोटा बिधा पर्याप्त हुँदैन रहेछन् । उपन्यासको रेस्पोन्स जस्तो भए पनि मैले मेरो गाउँको तत्कालीन अवस्था देशको एउटा महत्वपूर्ण भाग हो र यसलाई लेखेर राख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । राजनीतिक हिसाबले पनि कोशी पारिको मधेश धेरै लेखिनुपर्ने बिषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले धेरै अघिदेखि मनमा रहेको त्यो बिषयलाई मैले लेख्नका लागि उपन्यास छानेको हुँ ।
भनेपछि उपन्यासको परिवेश र पात्र सबै सत्यको नजिक छन् ?
उपन्यासमा आत्मकथा वा संस्मरणजस्तो पूरै सत्य हुँदैन र हुनुहुँदैन पनि । तर, परिवेश र घटना मेरै गाउँ वरपरका सत्य घटना हुन् । पात्रहरु प्नि त्यही हिसाबले सत्य र यथार्थको नजिक छन् । जनताले खपेका कहर, तिनका सपना र राजनीतिले तिनलाई गरेको उपयोग गरेर फ्याँक्ने पीडादायी कथा मैले उपन्यासमा ल्याएको छु । त्यहाँका आदिवासीहरु जंगल फाँडेर नयाँ मान्छेको भीड बढेपछि त्यही भीडमा हराए । राज्यको विकासै नीतिले तिनलाई छोएन बरु स्थानीय सम्पदा पूरै मासिए । तर सपना देखाउँदै थप शोषण गर्ने क्रम चल्यो, पछि प्रजातन्त्र आएपछि यो झन् जारी रह्यो । यो अवस्थामा थोरै मात्र कल्पनाको प्रयोगले उपन्यास तयार गरियो ।
मध्यम आकारको उपन्यास तयार गर्न कति समय लाग्ने रहेछ ?
मनमा बसिरहेको अनि देखे, भोगेको कथा भएका कारणले यसमा खासै रिसर्च गर्ने वा अपडेटेड हुनुपर्ने ठाउँ थिएन । केवल लेख्नु थियो । बिगतमा नेपालमा रहँदैदेखि केही लेख्दै, मेट्दै गरिरहेको थिएँ । विदेश आएपछि पनि बिभिन्न देशमा रहँदा लेख्ने प्रयास गरे पनि पूरा गर्न सकिनँ । गत बर्ष यही समयदेखि कोरोनाका कारण बेरोजगार भएपछि लेख्नु बाहेक अन्य काम नै रहेन । दैनिक धेरथोर केही लेखिरहँदा उपन्यासको पहिलो ड्राफ्ट करिब पाँच महिनामा सकियो । बाँकी पाँच महिना जति सम्पादन र अन्य प्रक्रियामा लाग्यो ।
विदेशमा रहँदा नयाँ बिषय नभेटेर यो बिषय रोज्नुभएको हो ?
यो किताब त पहिले नै मनमा राखेका कारण यसरी लेखेँ । हामीले विदेश बसेर सिकेका र देखेका कुरा पनि लेख्नपर्छ तर नेपाली परिवेशलाई छोएर भन्ने लाग्छ । अब केही बर्षपछि विदेशिएका नेपाली र तिनको भोगाइका बिषयमा लेख्ने सोचिरहेको छु । तर त्यसरी लेख्दा पनि देशको मूलनीति अर्थात् राजनीतिलाई अनदेखा गरेर त लेख्न मिल्दैन । देशको समग्र परिवेशकै कारण जनता विदेश जाने हो । यहाँ देखेभोगेका बिषय समेटिए पनि आगामी लेखनमा पनि नेपाली पात्र र परिवेश नै मूलरुपमा आउँछन् ।
नेपाली उपन्यासका कमजोरी र सबल पक्ष के के देख्नुहुन्छ ?
मलाई केही कुरामा नेपाली समुदाय अलिक अनौठो लाग्छ । अन्य देशको समाज र सचेत मान्छे भन्दा नेपालमा लेखक संख्यात्मक हिसाबले बढी नै छन् कि भन्ने देखिन्छ । थोरै पढेलेखेको समुदायमा केही न केही लेखिहाल्ने क्रम बढेको छ । धैर्य, लगन र भाषाका हिसाबले उपन्यासकारको संख्या पनि बढिरहेको कुरामा सबैले खुसी नै हुनुपर्ने अवस्था छ । एउटा लेखकले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन । तैपनि म आफैं पाठकका हिसाबले भन्नुपर्दा उपन्यासमा मुलुकका मूल समस्या र जनताका बिषय चाहीँ कमै उठेका छन् जस्तो लाग्छ । कथाको समय र राजनीतिबारे थाहै नपाएजस्तो गरेर गहन बिषयमा पनि कतिपय किताब लेख्ने प्रयास गरिएको छ । यो पाटो मलाई अनौठो लाग्छ ।
तपाईंकै किताब बजारमा गएपछि पाठकबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
उपन्यासको आयु अलिक लामो हुन्छ र त्यसको प्रतिक्रिया आउन पनि समय लाग्छ । हरेक किताबका प्रतिक्रिया पाठकैपिच्छे फरक फरक हुन्छन् । मेरो सवालमा चाहीँ प्रकाशनअघि मैले पाण्डुलीपि पढ्न दिएका साथीभाइ र प्रकाशकको प्रतिक्रिया उत्साहजनक थियो । अहिलेसम्म पाएका थोरै पाठक प्रतिक्रिया पनि राम्रै छन् । सबैलाई सबै किताबले छुनैपर्छ र मन पर्नै पर्छ भन्ने छैन । चर्चित् पुरस्कार पाएका र मिडियामा राम्रा भनिएका कतिपय किताब म आफैंले पढ्न नसकेर छाडेको पनि छु । म अहिलेसम्म पाँचवटा किताबको लेखक भए पनि सयौं किताबको पाठक हुँ । यसर्थ पनि पाठकको रुची, सीमा र अपेक्षालाई मेरो चेतनाले सम्मान गर्छ, गर्नुपर्छ । सकेसम्म जानेसम्म राम्रो लेख्नु र लेखिरहनु लेखकको काम हो । आलोचना आएमा त्यसमा आएका बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो, सही सुझावलाई मान्दै पछिल्ला लेखनमा सुधार गर्ने हो । बजारमा वाहवाह भनिने र हज्जारौं बिक्री गरेर लाखौं कमाउने भन्दा पनि गम्भीर पाठकले आहा ! भन्छन् भन्ने अपेक्षा चाहीँ छ ।
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज वडा नं. १८ सिक्टा सिचाईको कार्यालय पूर्व जाने सडक कालोपत्रे गर्नका लागि शिलन्यास गरिएको छ । वडा अध्यक्ष दिपक वर्माले एक कार्यक्रमका बीच सो सडकको शिलन्यास गरेका हुन । १ हजार ५ सय ५० मिटरको सो सडक आठमिटर चौडा रहेको छ । करिव पाँचसय मिटरसम्म पक्की नाली […]
७ मंसिर २०७६, शनिबार १६:३७
८ बैशाख २०७४, शुक्रबार १९:३९
२३ बैशाख २०७६, सोमबार १९:५४
नेपालगञ्जको रामलिला मैदानमा सन्त निरंकारी सत्संघ हुँदै